Xoghayihii Hore Ee Garabka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha WADDANI Oo Madaxweyne Siilaanyo Ka Difaacday Eedo iyo Dhaliilo Loo jeediyay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Xoghayihii Hore Ee Garabka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha WADDANI Oo Madaxweyne Siilaanyo Ka Difaacday Eedo iyo Dhaliilo Loo jeediyay
Hargeysa (SDWO.om):- Xoghayihii hore ee garabka dhallinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI Rooda Cabdi Muuse, ayaa madaxweyne Siilaanyo ka difaacday eedo iyo dhaliilo ay usoo jeediyeen masuuliyiinta xisbiga WADDANI, eedahaasi oo la xidhiidhay in isagoo madaxweyne qaran ah in uu hadana la shiray beeshiisa.
Waxaanay sheegtay in aanu jirin sharci iyo xeer u diidaya in madaxweynuhu uu la kulmo beeshiisa, isla markaana beeshiisu ay ka mid tahay dadka uu madaxweynaha u yahay.
Marwo Rooda Cabdi Muuse, oo maanta saxaafadda kula hadashay magaaladda Hargaysa, waxay tilmaantay in aanay madaxweynaha xaaraan ka ahayn in uu beeshiisa ama beel kale la shiro.
Waxaanay tidhi “Waxa uu xisbiga laba bilood jirka ah yidhi madaxwayne Siilaanyo lama hadli karo lamana arrinsan karo dadka uu ka soo jeedo, waxaan aaminsanahay oo aan qabaa sida uu madaxweynuhu ula hadlo bulshada Somaliland in uu beeshiisana ula hadli karo.
Waayo waxay ka mid yihiin bulshada uu madaxweynaha u yahay. Xaaraan-na kama aha in ay madaxweynaha la hadlaan”.
Geesta kale marwo Rooda Cabdi Muuse, ayaa ku eedaysay xisbigaasi in uu xurmo darro kula kacay hablaha reer Somaliland. Waxaanay wax lala yaabo ku tilmaantay madaxda iyo masuliyiinta xisbiga WADDANI oo hal mar u wada jawaabay wasiirka Maaliyada Somaliland Samsam Cabdi Aadan.
“Shirwaynihii xisbiga WADDANI ee dhacay 20-kii bishii October ee sanadkan, waxa uu xurmo darro kula kacay hablaha Somaliland. Maalintii aan xisbigaasi anigu ka tegay waxaa ii soo jawaabay nin xidhibaan ah oo magaciisa la yidhaahdo Aareeye, oo ka soo jeedda gobolka Selel.
Waxaana isku-kay qaban waayay degaanka uu ka soo jeedo xildhibaanku iyo erayadii uu adeegsanayay ” ayay tidhi xoghayihii hore ee dhalinyaradda iyo ciyaaraha xisbiga WADDANI.
Iyadoo hadalkeeda sii wadatay-na waxay tidhi “Dhamaanba inta xisbiga WADDANI masuuliyiintiisa sare waxay saxaafadda u soo fadhiisteen wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan, oo ay leeyihiin waxay gubtay dayrkii Makka.
Anigu waxaan u arkaayay erayada ay Samsam Burco ka tidhi in ay ahayeen erayo ku haboon goobta la joogay iyo madasha la fadhiyey, waxaa kale oo xisbiga Waddani ilawsan yahay in wasiirka Maaliyadu yahay garabka midig ee xukumadda ama xisbiga uu la shaqeeyo”.